🌳 I-Cedro Real (iValle de Angeles) 🏡⭐⭐⭐⭐⭐ - I-Airbnb
🌳 I-Cedro Real (iValle de Angeles) 🏡⭐⭐⭐⭐⭐
Valle de Ángeles, Francisco Morazán Department, Honduras
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLeo
ICedro Real yindlu entsha ehonjiswe ngokukhethekileyo yeendwendwe zethu enobutofotofo bendlu yesixeko kodwa esemaphandleni. Ijikelezwe yipine, imedari kunye nemithi yeziqhamo eyenza kubekho indalo ngokupheleleyo. Ikwimitha ezimbalwa ukusuka kwindledlana enkulu ekhokelela eValle de Angeles kodwa inikezela ngobumfihlo nobutofotofo. Ineendawo ezingaphandle, iindawo zokoja inyama nemicimbi.
Ukuba kufutshane nedolophu yaseValle de Angeles, iindwendwe zinokufikelela lula ekutyeni, ezolonwabo nenkcubeko. Le ndlu ine-TV neintanethi.
47" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.98 · Izimvo eziyi-52
Kufuphi nale ndawo kukho iValle de Angeles, ilali eqhelekileyo yekoloni enezinto ezininzi
I am Leonardo Javier and I have always loved the idea of service and hospitality. I work at a laboratory full time but want to offer travellers a place to stay and enjoy the beauty of my country and rural areas. This rental home is a project between me and my wife Michelle and we hope all our guests enjoy their stay and ideally keep coming back.
I love travelling and find that the small details are what matter most and make a lasting impression and hope to provide these small details. Even if at the time I am not a full time host, I will be available during your stay to help in any way possible to accomodate your needs and make sure your experience is special.
I am Leonardo Javier and I have always loved the idea of service and hospitality. I work at a laboratory full time but want to offer travellers a place to stay and enjoy the beauty…
Ngexesha lokubhukisha nokuhlala, ndiza kufumaneka kwiindwendwe. Le ndlu inabasebenzi abancedayo ekubhaliseni xa ufika, xa uphuma naxa uvula isango nokulayita umngxuma womlilo.